Abavelisi beCPLA Cutlery, abaThengisi -iFektha yeChina yeCPLA Cutlery
ICPLA eCutterry Codryry Re ...
ICustla yeSustainab engenasiplasitiki ...
I-CPLA + i-Como esekwe kwizityalo ...
ICompost esekwe kwiCPLA ...
Iipesenti ezingama-100 zoqalo lwendalo ...
I-CPLA + i-bamboo esekwe kwiZityalo engasetyenziswanga ePlasitiki engenasici isi-7 ye-intshi
ICPLA esekwe kwiPlanethi engasetyenziswanga yiplasitiki engasetyenziswanga Hlaziya isayizi encinci yokusika
I-crystallized poly-lactic acid, okanye i-CPLA, yipolymer esekwe kwisityalo esetyenzisiweyo kwilindle lethu. Ukunqunyulwa komzimba kweCPLA komelele kuqinile kwaye yomelele ngokunyamezela okuphezulu kobushushu. I-cut -ry encinci yesayizi encinci ingasetyenziselwa ukuhambisa ikofu, idayisi encinci, isidlo sakusasa, i-ice-cream yokwenza ukutya kwangaphandle okanye ngaphakathi.
ICPLA esekwe kwiPlatinic engasetyenziswanga yiplasitiki engahlawulelwanga ezi-6 ze-intshi
I-crystallized poly-lactic acid, okanye i-CPLA, yipolymer esekwe kwisityalo esetyenzisiweyo kwilindle lethu. Ukunqunyulwa komzimba kweCPLA komelele kuqinile kwaye yomelele ngokunyamezela okuphezulu kobushushu. I-cutlery engenasiplastiki ingasetyenziselwa iisuphu zeserver, izitya zerayisi, okanye nakuphi na ukutya okuphekiweyo ngaphandle okanye ngaphakathi kwendlu.
ICPLA esekwe kwiPlanethi engasetyenziswanga yiplasitiki engenasiphelo i-6.5 intshi
I-CPLA esekwe kwiPlatinic engasetyenziswanga yiplanethi engenasiphulelo i-intshi ezi-7